» ‘चाडपर्वका बेलामा पालिकाका कोही पनि भोकै हुनुपर्दैन ।’
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:३३
राजकुमार मल्ल, अध्यक्ष, राक्सिराङ गाउँपालिका, मकवानपुर
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका कोरोना संरक्रमण सुरुदेखि नै यसबाट बनाउँनका लागि विभिन्न अभियानमा लागिपर्‍यो । अहिले कोरोना विशेष आइलोसशन वार्ड निर्माणमा सक्रिय पालिकाले कोरोनाबाट सुरक्षित हुनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गर्दै अघि बढेको छ । विकट क्षेत्र भनिने राक्सिराङमा विकास निर्माणका कार्य भइरहेका बेलामा विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारण केही विकासको गति सुस्त भइरहेको पालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल बताउँछन् । पालिकाका कोही पनि भोकै बस्न नपरोस्, यदि कोही भोकै हुने अवस्था आएमा आफूहरुले त्यस्तालाई चाडपर्व मनाउँनका लागि आवश्यक खाद्यान्न उलपब्ध गराउँने अध्यक्ष मल्लको योजना छ । पालिका अध्यक्ष मल्लसंग गरिएको कुराकानी :
कोरोनाबाट सुरक्षित रहनका लागि गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ ?
कोरोना माहामारी सुरु भएदेखि नै हामीले यस भाइरसबाट सुरक्षित रहनका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौं । अहिले गाउँपालिकाले आइसोलेसनवार्ड निर्माणको काम गरिरहेको छ । एक महिनाभित्र २५ बेडको आइसोलेशन वार्ड निर्माण कार्य सक्ने हाम्रो योजना छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्दैछौं । अहिले निर्माण गरिने स्वास्थ्यचौकी र आइसोलेसन भवनलाई पछि अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनेर हामी लागिपरेका हौं । स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि हामीले एक करोडमा ठेक्का लगाएका छौं । दशैं तिहारपछि विद्यालय चलाउनुपर्ने भएकाले विद्यालयमा राखिएको आइसोलेसन हटाउँदै आइलोसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको हो । यस्तै, कोेरोना सम्बन्धि जनचेतना जगाउँनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा मानिसमा चेतना जगाउँने काम नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचका लागि वडाका टोल टोलमा हामी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं । स्वास्थ्यमा ध्यान दिइनुपर्छ, सरसफाई गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकमा पुर्‍याउँनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
कोरोनाबाट बच्न, बचाउनका लागि पालिकाले कति बजेट छुट्याएको छ ?
हाम्रो गाउँपालिका विगतदेखि नै सबै विकास निर्माणका काममा पछि पर्दै आइरहेको थियो । यहाँका जनताले विकास निर्माणका धेरै चाहना पनि गरेका छन् । विगत चालिसौ-पचासौं वर्षमा नभएका विकासको छलाङ हामीले दुई वर्षमा मारिरहेको अवस्था छ । विगतमा मोटरबाटो नभएर अनेक दुःख भोग्नुपरेको अवस्थामा अहिले घरघरमा मोटरबाटो पुगिरहेको छ । तर, अहिले कोरोना भाइरसका कारण विकास निर्माणका काममा केही अप्ठ्यारा अवस्था सिर्जना भएका छन् । मान्छे बाँचे नै विकास भन्ने भएको छ यतिबेला । विगत छ महिना यता विकासमा सुस्त भएपनि मान्छेलाई कोरोनाबाट बचाउँनका लागि विभिन्न कार्यहरु हामीले गरेका छौं । गत आवको जेठमा २५ लाख रुपिया विनियोजन गरेर कार्य अघि बढायौं । प्रदेश सरकारबाट दश लाख रुपिया सहयोग प्राप्त भयो । साथै, अन्य विभिन्न सहयोगीदातामार्फत गरी ६० देखि ७० लाख रुपिया हाम्रो कोषमा जम्मा भयो । यो रकमबाट हामीले कोरोनाबाट बच्न क्वारेन्टाइन, राहत वितरण, सूचना प्रवाह लगायतका कार्य गर्‍यौं । राहत हामीले तीन-तीन पटक वितरण गरेका हौं । अहिले आइसोलेशन बन्दै छ । कोरोनाका लागि हामीले एक करोड बजेट छुट्याएका छौं । संघीय सरकारले आइसोलेसन राख्नका लागि दश लाख रुपिया बजेट दिएको छ । पहिलाको बाँकी ३७ लाख रुपिया पनि हामीसंग छ । सेनिटाइजर, माक्स लगायतमा हामीले दश-पन्ध्र लाख रुपियाको काम गर्‍यौं भने अहिले निर्माण गर्न लागिएको आइसोलेसन वार्डका लागि ५० लाख लागत लाग्ने स्टिमेट तयार भएको छ । कस्तो प्रकारको विपद्को अवस्था आउँछ सो अनुसार खर्च गर्ने भनेर हामी पालिका पूर्व तयारीमा छौं ।
दशैं आयो, तिहार आउँदैछ । यस्ता चाडपर्वमा घर बाहिर रहेकाहरु पनि पर्व मनाउँन गाउँघरमा आउँने हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नसक्छ । यहाँहरुको तयारी के छ ?
बाहिर बसेका मानिसहरु चाडवाडका बेलामा घर आउने चलन छ । गाउँमा संक्रमण पस्न सक्नसक्छ भन्ने हामीलाई शङ्का छ । चाडपर्वका बेलामा खाईपिई तथा तडक भडक गर्दा संक्रमण फैलिने भएकाले त्यसो नगरी सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित रही चाडपर्व मनाउँने भनेर सूचना सन्देश जारी गरेका छौं । वडा वडामा स्वयम् सेवकमार्फत यस्ता अभियान चलाएका छौं । बजारबाट दशैं तिहार मान्नका लागि गाउँ फर्किएकाहरुबाट संक्रमण के कस्तो गतिमा फैलेला भन्नेमा हामी सचेत बनिरहेका छौं ।
राक्सिराङ गाउँपालिका विकट भएकाले यहाँ गरिबी, भोकमरी पनि उतिक्कै छ भनिन्छ । चाडपर्वका बेला कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था चाँही छ कि छैन ?
हाम्रो पालिकामा कोरोनाकै कारण कोही भोकै बस्नुपरेको अवस्था छैन । कामबाट गाउँमा फर्र्किएकाहरुले विगतमा जस्तो पैसा ल्याउन सकेनन् भने पनि गाउँमा मकै पाकेको छ, कोदो फल्दै छ । यहाँका नागरिकलाई ३ देखि ६ महिनालाई अब खानाको अभाव छैन । गाउँमा ९९ प्रतिशत नागरिक खेतीपातीमै आश्रित भएकाले खानका लागि समस्या छैन । यदि कसैले दशैं मान्न सकेनन् भने हामीले गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर भनेका छौं । कोही त्यस्ता आए भने चाडपर्व मनाउँनका लागि चामलहरु वितरण गरिदिने हाम्रो जमर्को छ । चाडपर्वका बेलामा कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँन हामी दिने छैनौं । हामीले सहयोग गर्नका लागि केही सहयोगीदाताहरुलाई पनि भनेका छौं । अहिले लक डाउन नभएपनि कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले तडक भडक नगरी चाड मनाउँन हामीले आग्रह गरेका छौं । समस्त पालिकाबासीलाई घाँडी हेरी हाड निल्ने तरिकाबाट चाडपर्व मनाऔं भन्न चाहान्छु ।
आजको मध्यस्थता साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तरवार्ता
आफुहरुकै अर्थक प्रयासमा निमार्ण भैरहेको बाटोमा आफ्नै आँखा अगाडि दुर्घटना हँदा दुखी र विचल्ति भइदोरहेछ – म्यानेजर कार्कि
समुदायको सेवाको समय सिमा हुँदैन : कडेल
लकडाउनदेखि व्यवसायी मर्कामा परेका छन् : राउत
‘झोले व्यापारीको संख्या बढिरहेको छ !’